eNasha.com - पार्टीको रौनक युट्युबमा चुहिँदा...
आफ्नो टीन एजर छोरालाई बाउले नाक फुट्ने गरी हिर्काएपछि बाउलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । छोराको दोष यति मात्र थियो, घरमा आफ्नो १८ औँ जन्मोत्सवको अवसर पारेर उनले पार्टी दिएका थिए र त्यो पार्टी-भिडियो उनले युट्युबडटकममा पोस्ट गरिदिएका थिए ।
त्यसो त बाउले टिन एजर छोराको नाक भाँचिने गरी हिर्काउनुको कारण यु ट्युबमा पोस्ट गरेको भिडियो मात्र कारण भने होइन । त्यो भिडियोको कारण बाउलाई थाहा भयो, आफ्नो घरमा भएका रक्सीका बोतलहरु कसरी सखाप भएछन् ! नबोलाइएका एक सयभन्दा बढी टीन एजर केटाहरुको झुण्डले घरमा पार्टीको रामरमाइलो मात्र लिएनन्, घरमा भएका स्याम्पेन, ह्वीस्कीसमेत चोरिदिए । त्यति मात्र कहाँ हो र ! टन्न पिइसकेपछि तिनले घरको झ्याल पनि राम्रैसँग फुटालिदिए ।
त्यसपछि त इञ्जिनियर बाबु डेविड वर्थी, ५३, को कन्पारो तातिहाल्यो । त्यसैले रिसको झोँकमा आफ्नै छोराको नाक थेप्चिने गरी हानिदिए । मज्जाले चुटाई खाएपछि प्रहरीले हेलिकप्टरमा छोरालाई उपचारार्थ अस्पताल लगेको समाचारसूत्रले जनाएको छ ।
तर कथा यत्तिमै सकिएको छैन । पार्टीमा आफूहरुलाई नबोलाइएको झ्वाँकमा त्यहाँका स्थानीय अरु केटाहरुले घरमा तोडफोड मात्र गरेनन्, परिवारका अन्य सदस्यलाई घरबाहिर ननिस्किनसमेत चेतावनी दिइएको छ । रोयर्सट समाचारलाई पेशाले नर्स सुसान वर्थी, ५२, ले भनिन्- "घरका सिसा र घरका रक्सी त रित्तिए नै बाहिर निस्कनसमेत गाह्रो भयो । उनीहरुलाई पार्टीमा नबोलाइएकोमा जबरजस्ती घरमा घुस्न त घुसे, त्यतिले मात्र उनीहरुलाई चित्त बुझिरहेको छैन ।"
"हामीलाई बाहिर निस्कनसमेत डर लागिरहेको छ", उनले थपिन् ।
तर यु ट्युबमा भएका भिडियो उनकै छोराले चाहिँ पोस्ट नगरेको बताएका छन् । अरुले नै घरमा भएको तोडफोड, त्यसअघिको रामरमाइलो सबै कुराहरु पोस्ट गरिएका छन् ।
छोरा क्रिस्टोफरले ३० जना मात्र निम्तालुलाई घरमा पार्टीको लागि बोलाएको थियो तर जम्मा भए सय जनाभन्दा बढी । र, ती हुलले घरको गेट समेत तोडफोड गर्दै पार्टीमा छिरे र तिनले एकै छिनमा घरलाई कुरुक्षेत्र बनाइदिए ।
इन्टरनेट माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल भव्यता नग्नता बलिउड मूर्ख्याइँ श्रीमानश्रीमती मुद्दा मामिला विज्ञापन कीर्तिमान परिस्थिति फट्याइँ हलिउड उदेकलाग्दो उदारता उपाय सेक्स